IVoucherify: Qalisa iiNkuthazo ezenzelwe wena ngeSicwangciso samahala seVoucherify | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 7, 2021 NgeCawa, ngo-Novemba 7, 2021 Katarzyna Banasik
Qinisekisa yi-API-yokuqala yokuKhuthaza kunye neSofthiwe yoLawulo lokunyaniseka enceda ukusungula, ukulawula, kunye nokulandelela imikhankaso yokuthengisa eyenzelwe umntu efana namakhuphoni esaphulelo, ukunyusa okuzenzekelayo, amakhadi esipho, i-sweepstakes, iinkqubo zokunyaniseka, kunye neenkqubo zokuthumela.
Iintengiso ezenzelwe wena, amakhadi esipho, iziphiwo, ukunyaniseka, okanye iinkqubo zokudlulisela zibaluleke kakhulu kumanqanaba okuqala okukhula.
Abaqalayo bahlala besokola ekufumaneni abathengi, apho ukuphehlelela iikhuphoni zezaphulelo ezenzelwe umntu, unyuso lwenqwelo okanye amakhadi esipho kunokubaluleka ekurhwebeni abathengi abatsha.
Ngaphezulu kwe-79% yabathengi base-US kunye ne-70% yabathengi base-UK balindele kwaye bayaluxabisa unyango lomntu ngamnye oluza namava e-e-commerce enziwe kakuhle.
Njengoko isiseko sabathengi sokuqalisa sihlala siphantsi, ukuthengisa yinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso. Ukuqaliswa kweentengiso zenqwelo kunye neengxowa zemveliso kunokunceda ekuthengiseni kakhulu.
Iinkqubo zokudlulisela zibalulekile ukukhupha igama kwaye inokuba yinjini yokukhula yoqalo ngemveliso enkulu kodwa ukubonakala okuphantsi (Amandla e-OVO, umzekelo, wasebenzisa esi sicwangciso ukungena kwimarike entsha).
Intengiso yokuthumela ivelisa ukusuka kwi-3 ukuya kwi-5 amaxesha aphezulu okuguqulwa kwamazinga aphezulu kunawo nawuphi na umjelo wokuthengisa. I-92% yabathengi bayayithemba ingcebiso yabahlobo babo kwaye i-77% yabathengi bazimisele ukuthenga imveliso okanye ukusebenzisa iinkonzo ezicetyiswa ngumntu abamaziyo.
Nielsen: Thembela kwiNtengiso
Lo ngumthombo oxabisekileyo wabathengi abatsha, ngakumbi kumashishini e-niche.
Inkqubo yokunyaniseka inokubonakala ngathi igqithisa kwinkampani eqalayo kodwa ngaphandle komnye, basengozini yokuphulukana nabathengi abafaka umgudu omkhulu kunye nemali yokuyifumana. Ngaphezu koko, nokunyuka kwe-5% ekugcinweni kunokukhokelela ekubeni 25-95% ukwanda kwengeniso.
IVoucherify isandula ukwazisa a isicwangciso sobhaliso lwasimahla. Eli lithuba elihle lokuqalisa kunye nee-SME ukuba ziqalise ngokuzenzekelayo, unyuso olulolwakho kunye nokuphucula ukufunyanwa kwabathengi kunye nokugcinwa simahla, kunye notyalo-mali oluncinci lwexesha lonjiniyela. Isicwangciso sasimahla siquka zonke iimpawu (ngaphandle kwe-geofencing) kunye neentlobo zephulo, kubandakanywa ukunyuswa komntu, amakhadi esipho, i-sweepstakes, ukuthunyelwa, kunye nemikhankaso yokunyaniseka.
Siyavuya ukuqalisa ukunika isicwangciso sobhaliso lwasimahla. Sikholelwa ukuba kuya kunceda abaninzi abaqalayo kunye nee-SMBEs ukuba baqalise ukukhula kwabo kwaye siyakuvuyela ukuba yinxalenye yalo. IVoucherify yakhiwe ngabaphuhlisi, kubaphuhlisi kwaye siyavuya ukubonelela ngetekhnoloji yanamhlanje kuzo zonke iisayizi zamashishini, ngexabiso elifikelelekayo kubo.
UTom Pindel, iCEO yeVoucherify
Isicwangciso sasimahla seVoucherify sinezi zinto zilandelayo
Inani elingenamkhawulo lamaphulo.
100 API iminxeba / iyure.
Iifowuni ze-1000 ze-API / ngenyanga.
Inkxaso eluntwini edodobalayo.
Iziseko ezingundoqo ekwabelwana ngazo.
Ukuzinikezela ngenkonzo yobuqu kunye noqeqesho lwabasebenzisi.
Omnye umzekelo wokuqalisa okhule usebenzisa iVoucherify kukuba Tutti. I-Tutti sisiqalo esekwe e-UK esibonelela ngeqonga labantu bokuyila apho banokuqesha khona iindawo zayo nayiphi na imfuno yokuyila, nokuba kukuziqhelanisa, uphicotho, ukufota, ukudubula kwefilimu, umjelo ophilayo, okanye abanye. U-Tutti wayefuna ukusungula iinkqubo zokudluliselwa kunye namaphulo okukhuthaza ukunyusa ukufunyanwa kwabo kwaye wayefuna isisombululo sesoftware esiya kuba yi-API-yokuqala kwaye ilungele ulwakhiwo lwangoku olusekwe kwi-microservices esebenzisa iiplatifti ezahlukeneyo ezisekwe kwi-API, njenge. ngombala, Icandelo, ActiveCampaign.
Bakhetha ukuhamba neVoucherify. Bajonge abanye ababoneleli besoftware ye-API kodwa babenamaxabiso aphezulu kakhulu kuneVoucherify okanye ababonelela ngazo zonke iimeko zokuthengisa kwiphakheji esisiseko. Ukudityaniswa kunye neVoucherify kuthathe iintsuku ezisixhenxe kuTutti, eneenjineli ezimbini zesoftware ebhodini, zibalwa ukusuka ekuqaleni komsebenzi wokudityaniswa kude kube ngumkhankaso wokuqala. Enkosi kwiVoucherify, umdla kwiminikelo yabo uye wanda kwaye neqela labo likwazile ukufumana umbulelo esidlangalaleni ngokunikezela ngezaphulelo kwimibutho yesisa kunye ne-incubators zokuqalisa.
Yenza iVawucher kwi-Case Study kaTutti
Ungafumana uthelekiso oluneenkcukacha lwezicwangciso zorhumo kunye nemida yazo kwiVoucherify iphepha lamaxabiso.
Qinisekisa yi-API-centric promotion kunye nesoftware yokulawula ukunyaniseka ebonelela ngenkuthazo eyeyakho. IVoucherify yenzelwe ukuxhobisa amaqela entengiso ukuba aqalise ngokukhawuleza kwaye alawule ngokufanelekileyo imeko kunye nekhuphoni eyeyakho kunye nonyuselo lwekhadi lesipho, iziphiwo, ukuthunyelwa, kunye neenkqubo zokunyaniseka. Ndiyabulela kwi-API-yokuqala, engenantloko eyakhiweyo kunye neninzi yokudibanisa ngaphandle kwebhokisi, i-Voucherify inokuhlanganiswa ngaphakathi kweentsuku, inciphisa kakhulu ixesha lokuya kwintengiso kunye nokunciphisa iindleko zophuhliso.
Iibhloko zokwakha ezicwangcisiweyo zinceda ukudibanisa inkuthazo kunye naliphi na ishaneli, nasiphi na isixhobo, kunye nasiphi na isisombululo se-e-commerce. Ideshibhodi elungele umthengisi ukusuka apho iqela lezentengiso linokuqalisa, lihlaziye okanye lihlalutye onke amaphulo okuthengisa athatha umthwalo kwiqela lophuhliso. I-Voucherify inikezela ngenjini yemithetho eguquguqukayo yokunyusa ukuguqulwa kwakho kunye namazinga okugcina ngaphandle kokutshisa uhlahlo lwabiwo-mali lokunyusa.
IVoucherify ivumela iinkampani zabo bonke ubungakanani ukuba ziphucule ukufunyanwa kwazo, ukugcinwa kwazo, kunye namaxabiso okuguqulwa. njengezigebenga ze-e-commerce, ngeqhezu leendleko. Ukuza kuthi ga namhlanje, iVoucherify izuze ukuthenjwa ngabathengi abangaphezu kwama-300 (phakathi kwabo iClorox, iPomelo, i-ABInBev, i-OVO Energy, iSIG Combibloc, iDB Schenker, iWoowa Brothers, iBellroy, okanye iBloomberg) kwaye inceda izigidi zabathengi ngamawaka eephulo zokwazisa jikelele. iglowubhu.
Zama iVoucherify Mahala
Ukwazisa: Martech Zone ifake amakhonkco adibeneyo kweli nqaku.
tags: agileoneunyuso oluzenzekelayoamatikiti esaphulelounyuso lwasimahlaAmakhadi wesiphoinkqubo yokunyaniseka apiIinkqubo zokunyanisekanielsenukunyusa apiiinkqubo zokudlulisacandelosweepstakestom pindelqinisekisa